होशियार ! रिसले हजुरको आयु घटाउँछ… - IAUA
होशियार ! रिसले हजुरको आयु घटाउँछ…
ramkrishna October 18, 2017	होशियार ! रिसले हजुरको आयु घटाउँछ…
कसैको साना साना कुरामा पनि झनक्क रिसाउने बानी हुन्छ । यदि तपाई धेरै रिसालु स्वभावको हुनुहुन्छ भने तपाईलाई त्यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा पर्ने देखएको छ । रिस भनेको मानिसमा सामान्य रूपमा हुने उद्वेग हो । यदि यसलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले अरूलाई होइन, आफैंलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ। रिसाइहाल्नुअघि एकछिन सोच्ने बानी गर्नुपर्छ। यसो गरेको खण्डमा केटाकेटीलाई पिट्ने, घरेलु झगडा तथा अरू सामाजिक समस्या कम गर्न सकिनेमात्र होइन, आफ्नै स्वास्थ्यलाई पनि असल हुन्छ। रिसले उद्वेलित हुने वा एकदम झडंग रिसाउने जस्तो जुनसुकै व्यवहार पनि हाम्रो हृदयरोग र रक्तसञ्चार प्रणालीका निम्ति खतरनाक हुन्छ भन्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ। यी अनुसन्धानहरूले रिसको हृदयाघात र पक्षाघातसँग परस्पर सम्बन्ध रहेको जानकारी दिएका छन्।
Previous Previous post: किन हुन्छ बिहानको सेक्स मर्निङ वाकभन्दा फाइदाजनक !
Next Next post: किस गर्ने तरिका र त्यसको अर्थ !